७ पटककी सांसद, २५ बर्षमा मन्त्रीजस्ता अद्भूत राजनीतिक रेकर्ड राखेर अस्ताईन् सुस्मा स्वराज — SuchanaKendra.Com
७ पटककी सांसद, २५ बर्षमा मन्त्रीजस्ता अद्भूत राजनीतिक रेकर्ड राखेर अस्ताईन् सुस्मा स्वराज
काठमाडौं । भारतकी भूतपूर्व विदेशमन्त्री तथा भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेत्री शुस्मा स्वराजको ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनलाई मङ्गलवार साँझ दिल्लीस्थित एम्स् अस्पतामा भर्ना गरिएको थियो ।
स्वराजको निधन कार्डिएक अरेस्टका कारण भएको बताइएको छ । उनलाई अस्पताल लगिए पनि बचाउन नसकिएको बताइएको छ । कार्डिएक अरेस्ट भएपछि मानिसको मुटुमा इलेक्ट्रोनिक गडबडी हुने र त्यसै कारण मुटुको धड्कनको तालमेल बिग्रिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
पच्चीस वर्षको उमेरदेखि राजनीतिक यात्रा थालेकी स्वराजका राजनीतिक गुरु चाहिँ वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी थिए । उनको अन्तिम संस्कार बुधवार दिल्लीमा राजकीय सम्मानका साथ हुने कार्यक्रम छ । गत वर्ष उनले सन् २०१९ को चुनाव नलड्ने घोषणा गरेकी थिइन् । उनले त्यस्तो घोषणा गरेपछि उनका पति तथा भूतपूर्व राज्यपाल कौशलले भनेका थिए, ‘एउटा समय आएपछि मिल्खा सिंहले पनि दौडिन बन्द गरेका थिए ।
यिनी त विगत ४१ वर्षदेखि चुनाव लड्दै आइरहेकी छन् ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विटरमा सन्देश लेख्दै स्वराजप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गरेका छन् । मोदीले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘भारतीय राजनीतिको एउटा महान् अध्याय समाप्त भएको छ । भारत एउटी असाधारण नेताको निधनको शोकमा डुबेको छ ।
सुषमा स्वराज महान् व्यक्ति थिइन् । जसले मानिसको सेवा र गरिबहरूको जिन्दगी अझै राम्रो बनाउन आफ्नो जीवन समर्पण गरिदिइन् ।’ उनले अर्को ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘सुषमाजी एक अद्भुत वक्ता तथा गजबकी सांसद थिइन् । उनलाई सबै दलले सम्मान गर्थे । उनले भाजपाको हित र सिद्धान्तसँग कहिल्यै सम्झौता गरिनन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्वराजको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै भारत सरकार, भारतीय जनता र शोकसन्तप्त परिवारसँग सहानुभूति व्यक्त गरेका छन् । स्वराजले आफूलाई भाइ भन्ने गरेको सम्झना ओलीले ट्विटरमा गरेका छन् । आफ्नो शोक सन्देशमा भाजपाका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री अमित शाहले स्वराजको निधनबाट उनको मन अत्यन्त दुःखी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले आफू स्वराजको निधनको खबरले स्तब्ध भएको भन्दै ट्विटरमा सन्देश लेखेका छन् । मध्यप्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले पनि ट्विटरमा सन्देश लेख्दै स्वराजप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । स्वराजलाई अस्पतालमा भेट्न पुगेका कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले सुषमा स्वराजको बारेमा भने, ‘म सधै सोध्ने गर्दथे बहिनी तपाईँलाई कस्तो छ ?
उनी मलाई सोध्ने गर्थिन् दाई तपाईँलाई कस्तो छ ? हाम्री एक बहिनी अब यो संसारमा रहिनन् । उनी गजबकी वक्ता थिइन् । उनलाई हामी सधै सम्झिरहने छौँ ।’ स्वराजको निधनको खबरप्रति केन्द्रीय मन्त्रीहरू र सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका अन्य राजनीतिक नेताहरूले पनि दुःख व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सुषमा स्वराज भारतीय राजनीतिक वृत्तकी एक प्रखर तथा ओजस्वी वक्ता, प्रभावशाली सांसद र कुशल प्रशासकको रूपमा चिनिएकी थिइन् । कुनै समयमा भाजपाका नेता अटलविहारी वाजपेयीपछि सुषमा स्वराज र प्रमोद महाजन निकै लोकप्रिय वक्ता मानिन्थे । उनी संसददेखि सडकसम्मै लोकप्रिय थिइन् । सुषमा स्वराजलाई दिल्लीकी डी–चार अर्थात् चार लोकप्रिय नेताहरू मध्येकी एक मानिएकी थिइन् ।
उनले विगत चार दशकमा ११ पटक चुनाव लडेकी थिइन् । तीमध्ये तीन विधानसभा चुनाव थिए । जुन उनले जितिन् । उनी सात पटक सांसद भइसकेकी छन् । उनी संस्कृत, हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा धाराप्रवाह बोल्न सक्थिन् ।
भारतको विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सुषमा स्वराज इन्दिरा गान्धीपछिकी दोस्री महिला नेत्री हुन् । विदशमन्त्रीका रूपमा सुषमा स्वराज ट्विटरमा निकै सक्रिय रहेकी थिइन् । विदेशमा फसेका भारतीय नागरिकलाई सहयोग गर्ने विषयमा उनले निकै चासो दिने गरेकी थिइन् ।
उत्तरी छिमेकी नेपालमा सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प आएपछि सहयोग जुटाउन आयोजित दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रीका हैसियतमा सुषमा स्वराज पनि सहभागी भएकी थिइन् । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दिल्ली पुग्ने गरेका नेपालका प्रायः राजनीतिक नेताहरूसँग स्वराज परिचित थिइन् । बीबीसी